Ikhalenda lokuhlwanyela kwama-Lunar | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ikhalenda lokuhlwanyela kwama-Lunar
Ikhalenda lokuhlwanyela lunar
Uhlu lwemisebenzi engadini kanye nensimu, ikhalenda yokuhlwanyela inyanga kaDisemba 2017
Ebusika, isikhathi sokuphumula nokulala kuqala e-cottage ehlobo ezitshalweni. Lokhu akusho ukuthi akukho msebenzi kuwe. Kubalulekile ukuqapha izitshalo zasebusika, zimboze ngeqhwa, zizivikele ezihlahleni. Kukhona umsebenzi ezindaweni zokugcina izithombo, izingadi, nezitshalo zasendlini. Umlimi wekhalenda, umlimi wensimu kanye nomlimi wensimu, okufanele ukwenze ekuqaleni kukaDisemba Ekuqaleni kukaDisemba, kulandela ukulimala kwekhalenda ngenyanga kaDisemba 2017, uhambahamba ensimini, uhlanganise iqhwa eliseceleni kwesayithi: kuzokukwenza kube nzima kumagundane amancane ukugubha.
Ikhalenda Lunar yomgadi wensimu kanye nomlimi wensimu ngoMashi, 2019
Ithonya lezinkathi zenyanga ezinkambisweni zomhlaba sekuyisikhathi eside lifakazelwa ososayensi, ngakho akumangalisi ukuthi abalimi abaningi balalela umbono wabasezinkanyezi ekulimeni izitshalo ezihlukahlukene. Ngenyanga ngayinye, le nqubo izoba nezici zayo, okusho ukuthi izincomo zekhalenda lezinkanyezi kufanele zicatshangelwe unyaka wonke.
Ikhalenda Lokuhlwanyela Lunar ka-February 2019
Ukukhetha isikhathi sokutshala izitshalo, ukuguqulwa, ukusika izihlahla kanye nezinye izinqubo zokulima nezingadi, abalimi bavame ukulalela ikhalenda yenyanga. Izigaba zenyanga zithonya indlela isitshalo esabela ngayo ukungenelela ngaphandle ngendlela ethile. Ngomhlahlandlela wekhalenda kaFebhuwari ngo-2019 kanye nezinsuku ezihle zokusebenzela ingadi - funda ngezansi.
Umlimi wekhalenda weLunar kaNovemba 2019
Mayelana nethonya leNyanga ngezinqubo eziphilayo ezenzeka emhlabeni, isintu sesaziwa isikhathi eside, futhi okhokho bethu, abangaziqondi ngokugcwele izimbangela zalesi simo, bafunde ukuyisebenzisa ukuze bazuze, kuhlanganise lapho beqhuba izinhlobo ezahlukene zomsebenzi wezolimo. Ama-calendars Lunar ahlanganiswe ngale njongo angabasiza kuphela umlimi noma umhlali wehlobo, kodwa futhi kumuntu othanda izitshalo zasendlini.
Okhokho bethu baphinde babona ukuthi izidumbu zasezulwini zithonya isivuno sezitshalo zensimu. Ngakho ikhalenda yenyanga yazalwa, abalimi abaningi banamuhla abazama ukulandela lapho betshala izitshalo. Kusukela kulesi sihloko uzofunda ngokufika kwepelepele ekhalendeni yenyanga ngo-2019. Imigomo yokutshala i-pepper izithombo kwikhalenda yenyanga ngo-2019. Ngokuvamile, ukutshala i-pepper ukuze izithombo zibe khona kusukela ngoFebhuwari 15 kuya ku-Mashi 10.
Isigadi sekhalenda ye-Lunar kanye nomlimi wensimu ngo-2019 we-Urals
Kusukela ezikhathini zasendulo, isintu sisetshenziselwe ukuhamba kwezindikimba zasezulwini ukuphawula amaphuzu abalulekile kwezolimo: isikhathi sokutshala kanye nokuvuna. Lesi sihloko sigxile ezintweni zesikhalenda sokutshala inyanga somlimi wezitshalo nezensimu ze-Urals ngo-2019. Yithonya kanjani izinyanga zenyanga ekukhuleni kwezitshalo Eziningi zezitshalo zinamanzi angaphezu kuka-80%, ngakho ukukhanga kwenyanga kunethonya elikhulu kubo, kanye namanzi emzimbeni wamanzi.
Ikhalenda Lunar yokutshala utamatisi ngo-2019
Abanye abalimi ekuhlwanyela utamatisi ngezinsimu banakekele kokubili isikhathi esichazwe ngumsunguli kanye nendawo yenyanga ngosuku lwamanje. Ososayensi baqinisekisa umthelela we-satellite yomhlaba ngezinhlobo eziphilayo, phakathi kwezinye izinto, ezitshalweni - ngakho-ke, le ndlela isilungele ngokugcwele. Izinsuku ezifanele zokutshala utamatisi ngo-2019 ngokuya kwekhalenda yenyanga zixoxwa ngokuqhubekayo kulesi sihloko.
Ikhalenda Lunar ye-violets 2019
I-Saintpaulia isitshalo esilukhuni kakhulu - isikhathi esingenakulungiswa sokufakelwa kabusha singabhubhisa isiko. Ikhalenda yenyanga iyakusiza ukukhetha izinsuku ezihle kakhulu zokutshala nokutshala kabusha imbali yasekhaya. Ngesikhathi sokufeza ukusebenza ngo-2019, funda ngezansi. Izitshalo zithinta kanjani izigaba zenyanga?
Ikhalenda Lunar Lokuhlwanyela NgoJanuwari 2019
Izitshalo ezikhulayo nokuzinakekela ngokwezikhalenda zenyanga kuthiwa yizolimo ze-biodynamic, okucatshangelwa ithonya le-satellite emhlabeni ekukhuleni kwezimila. Lesi sihloko sinikelwe ekhalendeni yenyanga kaJanuwari 2019 - libala izinsuku ezinhle nokubi zokutshala, nezinsuku ezinconywayo zokwenza umsebenzi wokuzinakekela.